Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /customers/0/9/6/barqamaal.com/httpd.www/wp-includes/compat.php on line 502 Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhimatay dagaalada Syria – Barqamaal
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhimatay dagaalada Syria
arimaha – bulsha
Sweden: 9 dhalinyaro soomaali ah oo u jihaadtagay dalka suuriya oo la xaqiijiyay dhimashadooda
Written by mustafa, Feb 1, 2016, 0 Comments
Waxaa la soo bandhigay tirada dhalinyarada Soomaliyeed ee dagaalada siiriya ku dhumatay, wargayska aftonblodet oo ka mit ah wargaysyada ka soobaxa dalka Iswiidhan, ayaa soo bandhigay magacyada dhalanyarada ku dhintay jihaadka suuriya. Tirada guud ee dhalinyarada dhalashada iswiidhiska haysta ee tagay dalalka ay ka socdaan dagaalada loogu magacdaray jihaadka ayaa gaaraysa ilaa iyo 80 dhalanyaro oo ay ka midyihiin 20 dumarah ku waaso gabi ahaantadaba ka tagay dalka iswiidhan. Tirada aan kor ku soo xusay ee 80 ka ah 9 ruux oo ka mid ah tiradaasi waa Soomali haysta dhalashada iswiidhasha 2 ka mid ah waa dumar waxayna ka tageen caasimada dalka Iswiidhan ee Stockholm iyaga oo magacyadooda aan lasheegin, halka 7 kale ay yihiin wiilal ka kala tagay goobo kala duwan ee ka tirsan dalka Iswiidhan.
Ahmed Hassan Suleiman 2013 ayuu tagay Suuri ya ICE.
Sanadka dhalashada: 1989
Kudhashay: Soomaaliya. Haysta: jisiyad Iswiidhish.
Suuriya: Ku dhintay 2014.
ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo Maraykanka ku qaaday goob oo lu sugnaa.
Sanadka dhalashada: 1990
Suuriya: Ku dhintay. January 2015.
Ayaa Suuriya tagay 2013.
Sanadka dhalashada: 1991
Ku dhashay: Sweden. ah Soomali
Suuriya: ku dhintay January 2015.
Suuriya: ku dhintay 2015.
Khalid Osman Timayare
Koox kubada cagta oo ka dhisnayd magaalada Göteborg. waxuu ku biiray IS.
Suuriya: waxaa lagu arkay isga oo ka dhax muuqda filim ay soo dhigeen IS lama xaqiijin dhimashadiisa.
Ayaa ka amba baxay magaalada Örebro ee dalka Iswiidhan. Bishii Janaayo 2015.
Bille Ilais Maxamed
Ayaan ka amba baxay caasimada dalka Iswiidhan ee Stockholm ee June 2014. Waxa uu sidoo kale ka ka mid ahaa dhowr dhallinyaro ah oo u ku biiray IS. Waxaana 2010 looga shakiyay in uu xariir la leelayahay argagixisada,
Maxkamadda ku taala magaalada Göteborg ayaa la soo taagay taa soo markii dambe la beeniyay inuu xariir la leeyahay islamiyiinta IS.
Sanadka dhalashada: 1984
Suuriya: ku dhintay 2014